Olee otú Lelee Internet Speed ​​on iPad / iPhone
Na-elele Internet ọsọ na ihe iPad ma ọ bụ iPhone, e nwere ole na ole nzọụkwụ na a ga-agbasoriri n'ụzọ kwesịrị ekwesị:
1. swipe mkpịsị aka gị na ihuenyo kpọghee ngwaọrụ.
2. Ebe Safari (nchọgharị weebụ ndabara na iPad) anaghị akwado Adobe Flash, gaa https://itunes.apple.com/in/app/puffin-web-browser-free/id472937654?mt=8 na download na wụnye Puffin Web Nchọgharị.
3. Mgbe wụnye, na-emeghe Puffin Web Nchọgharị.
4. Ụdị SPEEDTEST.NET na adreesị mmanya na enweta na Tinye isi si n'akụkụ aka nri nke ihuenyo.
5. Ozugbo ị na-ibugharị ka OOKLA SPEEDTEST ibe weebụ, pịgharịa gaa na ala na enweta na Gị Speedtest.net Full weebụ na saịtị njikọ.
6. On zuru saịtị, mgbata AMALITE NWALERE na-amalite ọsọ ule.
Cheta na: The prerequisites / chọrọ na usoro kọwara n'elu bụ nkịtị maka ma iPhones na iPads na naanị ihe dị iche na okirikiri nhọrọ ukwuu nke interface nwere ike na-egosipụta na Eserese mgbe eji ihe iPhone.
Olee otú Lelee Internet Speed ​​na ihe Android Ngwaọrụ?
Na-elele Internet ọsọ na ihe gam akporo ngwaọrụ, e nwere ole na ole nzọụkwụ na a ga-agbasoriri:
1. Swipe mkpịsị aka gị na ihuenyo kpọghee ngwaọrụ. Cheta na: Tupu etinyewe n'ihu, download na wụnye Adobe Flash na gị android ngwaọrụ.
2. Mepee nchọgharị weebụ ndabara na ngwaọrụ.
3. Ụdị SPEEDTEST.NET na adreesị mmanya.
4. Kpatụ Tinye na ala-nri akuku nke ihuenyo.
5. Mgbe ị na-ibugharị ka OOKLA SPEEDTEST webpage, enweta Gị Speedtest.net Full weebụ na saịtị njikọ na ala.
6. Ozugbo ibugharị, enweta AMALITE NWALERE bọtịnụ iji malite Internet ọsọ ule na-eche ruo mgbe i na-egosipụta na-arụpụta.
Internet Speed ​​Checker égwu gam akporo na iOS
Na mgbakwunye na iji weebụsaịtị nwalee gị mobile Internet ọsọ, ị nwekwara ike ibudata ma wụnye ọ bụla-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa dakọtara na sistemụ na ekwentị gị / mbadamba. A ole na ole na-ewu ewu-atọ ndị ọzọ ngwa iji nwalee mobile Internet ọsọ na-depụtara n'okpuru:
1. Speedtest.net Mobile Speed ​​Ule
Nyiwe - Android na iOS
OOKLA ọnọde ngwa n'ihi na-anwale Internet ọsọ na android na iOS ngwaọrụ na otu mgbata. Ndị kasị ezi results na-egosipụta na dị ka na-erughị ka sekọnd 30 nke oge. The ngwa awade ndị na-esonụ ọkaibe atụmatụ:
• achọpụtazi download na bulite ọsọ nke dị njikọ Ịntanetị.
• jikoro Internet ọsọ iji kacha nso ọsọ ule nkesa iji nye ndị kasị ezi results.
• bulite na download ọsọ results nwere ike hụrụ iche iche.
2. Speed ​​Ule Internet
Nyiwe - iOS
Speed ​​Ule Internet bụ onye kensinammuo Internet ọsọ ule na ngwá ọrụ iOS ngwaọrụ. The ngwa awade dị iche iche granular nhazi nhọrọ maka elu ọrụ (Elezie ndị ọkachamara) iji nke ha pụrụ iji ngwa ya zuru. A ole na ole isi atụmatụ na Speed ​​Ule Internet nwere na-enye (na oge nke a edere) gụnyere:
•-anwale download, bulite, na ping nke dị njikọ Ịntanetị na mkpanaka gị na.
• Ịmata ụdị nke njikọ Ịntanetị dị otú ahụ dị ka 3G, 2G, Wi-Fi, wdg na n'ịgbanwe onwe ya na-akpaghị aka gbagote na ndị kasị ezi results.
• Inye mgbanwe na-ịkekọrịta ule results na ụfọdụ n'ime ndị isi na-elekọta mmadụ ụka n'Ịntanet saịtị dị ka Facebook, Twitter, wdg
3. Speed ​​Ule SpeedSmart WiFi & Mobile Network Speedtest
Speed ​​Ule SpeedSmart WiFi & Mobile Network Speedtest na-mepụtara VeeApps, mụ na-anwale Internet ọsọ na gị iOS ngwaọrụ, ngwa nwekwara ike:
• Atule latency na data nnyefe.
• Ịgbo na Internet ọsọ mbipụta ọ bụrụ na gị iOS ngwaọrụ nwere ike ọ bụla.
•-ahọpụta ndị kasị mma ọsọ ule nkesa dị ka kwa ọnọdụ gị.
4. Speedtest.pro Speed ​​Ule & WiFi Finder
Mepụtara site Frederik Lipfert, Speedtest.pro Speed ​​Ule & WiFi Finder-enye gị ohere iji lelee njikọ Ịntanetị ọsọ na mkpanaka gị na. Tụkwasị na nke a, ngwa ahụ nwekwara ike chọpụta dịnụ emeghe netwọk ikuku ndị dị nso ebe. Ụfọdụ ndị ọzọ na-eji ngwa ahụ na-enye na-agụnye:
• ịgbakọ ma na-egosipụta na ya pụta na-erughị 20 sekọnd.
• Idebe tracks nke gara aga ule results.
• ịchọputa dịnụ emeghe ngwa ngwa Wi-Fi hotspots.
5. Internet Speed ​​Ule 3G, 4G, WiFi
The Internet Speed ​​Ule 3G, 4G, WiFi ngwa na-mepụtara Speed-checker Ltd. The ngwa bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na programmụ na na-eji ọtụtụ nke mobile Internet ọrụ gafee n'ụwa. Nke a free ngwa nwere ike ibudata kpọmkwem site Google Play Store gị Android ngwaọrụ ego dịnụ njikọ Ịntanetị ọsọ n'ime sekọnd. A ole na ole ndị ọzọ atụmatụ awa site Internet Speed ​​Ule 3G, 4G, WiFi agụnye:
• The download na bulite ọsọ nke Internet nwere ike tụọ site na otu mgbata.
• Yana bulite na download ọsọ ule, ndị latency na furu efu ngwugwu nwekwara ike tụọ iji ngwa.
• The zuru ezu n'akụkọ ihe mere eme nke gara aga pụta ga-azọpụta ga-eme n'ọdịnihu zoro na atụnyere.
• The ngwa-enye gị ohere ịkọrọ ndị na-agba ule results na ụfọdụ n'ime ndị isi na-elekọta mmadụ ụka n'Ịntanet saịtị. (Ị nwere ike ịkekọrịta results si n'ime ngwa onwe ya.)
• The ngwa bụ dakọtara fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ arụpụtara site isi mgbere n'ụwa nile.
> Resource> iOS> Olee otú iji Lelee Internet Speed ​​na android na iOS Devices